Ndị na -emepụta China OEM OEM CNC Machined Parts factory na ndị na -eweta ya BASILE
Omenala CNC machining na-abụghị ọkọlọtọ
Igwe njikwa ọnụọgụ ọnụọgụ bụ ụdị nhazi na-abụghị ọkọlọtọ, nke na-agbanwe nha nke ọrụ ma ọ bụ arụmọrụ ọrụ. Mgbe ị na -eji CNC Machinery arụ ọrụ akụkụ igwe, onye na -ahụ maka ọrụ kwesịrị ịpịnye usoro teknụzụ niile, paramita teknụzụ na data mbughari nke etinyere na mmemme, yana n'ụzọ ozi dijitalụ edere na igwe njikwa iji chịkwaa nhazi ngwaọrụ.
Yabụ na enwere ike ịhụ na teknụzụ nhazi ngwa igwe CNC na teknụzụ nhazi igwe n'ozuzu ha bụ otu ihe, mana usoro nhazi igwe igwe CNC na -arụ ọrụ ma dịkwa mma, agbanyeghị, ọ nwekwara njirimara nke ya.
Usoro mmepụta igwe na -achịkwa ọnụọgụ na usoro nhazi
1. Usoro Mmepụta:
A na -akpọ usoro ịtụgharị akụrụngwa n'ime ngwaahịa ka usoro mmepụta. Mmepụta usoro tumadi na-agụnye njem na nchekwa nke ngwaọrụ, nkwadebe mmepụta, nkwadebe nke ọrụ oghere, n'ibu nhazi, n'elu ọgwụgwọ, mgbakọ, ule, debugging, mgbochi ọxịdashọn nhazi na mbukota nke ngwaahịa, wdg
Enwere ike kewaa usoro mmepụta n'ime usoro nrụpụta nke igwe ahụ niile ma ọ bụ usoro mmepụta nke otu akụkụ, n'ihe banyere usoro mmepụta nke nhazi ụlọ ọrụ dum ma ọ bụ usoro mmepụta nke otu ogbako.
2. Usoro Nkà na ụzụ:
N'ime usoro nrụpụta a kapịrị ọnụ, gbanwee ụdị na nha nke ihe ndị nwere oghere ozugbo, gbanwee na ngwaahịa anyị chọrọ, wee mee ngwaahịa emechara ma ọ bụ ngwaahịa emechara nke amara dị ka usoro teknụzụ. Usoro nkà na ụzụ bụ akụkụ dị oke mkpa ma dị mkpa na usoro mmepụta niile. Isi akụkụ nke n'ibu nhazi factory mmepụta usoro bụ machining technology usoro.
Kedu ihe bụ akụkụ nke usoro mMachining Flow?
1. Nkwadebe nke Machining Usoro:
Usoro nrụpụta na -ezo aka n'ọrụ ma ọ bụ otu ndị ọrụ na -arụ ọrụ, na -arụ ọrụ n'otu ebe ma ọ bụ na igwe nrụzi, maka otu akụkụ ma ọ bụ karịa maka mmecha site na akụkụ akụkụ, usoro nrụpụta bụ ntọala nke akụrụngwa nhazi igwe. , bụkwa ntọala nke ịhazi ngalaba atụmatụ mmepụta;
2. Nwụnye nke Workpiece:
Idochi akụkụ ahụ na igwe n'otu oge ka a na -akpọ usoro nrụnye. Mgbe ụfọdụ, n'otu usoro ahụ, ọ ga -adị mkpa ka arụnyere ihe eji arụ ọrụ ọtụtụ oge iji nweta ebumnuche kacha. Ekwesiri ighota ebe a na ekwesịrị ibelata ọnụ ọgụgụ nrụnye na nhazi, ka ọ wee belata njehie nke nrụnye wee chekwaa oge inyeaka ọzọ.
3. Nzọụkwụ Usoro:
N'elu nhazi akụkụ, n'okpuru ọnọdụ ngwaọrụ anaghị agbanwe agbanwe, ọsọ na nri, a na -akpọ usoro mmecha na -aga n'ihu nke akụkụ ahụ usoro nkwụsị. Usoro nhazi bụ akụkụ bụ isi nke usoro igwe;
4. Ụlọ ọrụ nhazi:
Iji mezue otu usoro, mgbe otu mgbachi na -ejikọ, a na -ebugharị ebe a na -arụ ọrụ na ihe ndozi site na ọnọdụ ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, site na isi ntụnye aka na -egwe ọka hexagonal, a na -akpọ ntụgharị ọ bụla ebe nhazi.
N'otu usoro usoro ahụ, ọ bụrụ na nhazi ya pere mpe, ịkwesịrị iji otu ngwa ọrụ, n'otu ọsọ na nri, n'otu ebe nhazi maka ịcha ọtụtụ oge, a na -akpọ mbepụ nke ọ bụla nri.
BMT bụ ndị nrụpụta igwe CNC ọkachamara, ụlọ ọrụ nwere igwe nhazi nkenke, na -enye CNC, igwe nrụpụta na ọrụ ndị ọzọ.
BMT nwere ahụmịhe bara ụba n'ọhịa ụgbọ ala, ikuku, igwe, nri, ike, mmanụ, ọrụ ugbo, wdg, anyị na -anabata nhazi akụkụ omenala ma nabata gị maka mkparịta ụka ọ bụla.
Nke gara aga: Akụkụ CNC Machining nkenke Machinery Parts
Osote: Akụkụ CNC Machining Aluminom
Akụkụ CNC Machining omenala
Ihe eji arụ ọrụ CNC
Ndị na -emepụta akụkụ ọkachamara ọkachamara
Nkenke CNC Lathe Machined Parts
Igbe galvanized, Omenala igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ, Akụkụ Ngwa CNC, Igwe eji arụ ọrụ titanium, Akara akpaghị aka, High-End mpempe akwụkwọ Metal Parts ngwaahia,